Sidee loo qaadaa go'aan dhab ah oo ku saabsan qalabka muhiimka ah ee internetka ee Amazon?
Doorashada qalabka muhiimka ah ee muhiimka ah ee internetka loogu talagalay raadinta Amazon waa hawl aad u adag. Adiga oo tixgelinaya in alaabta aad liiska gashan tahay SEO ay ku soo noqoto badi cilmi baaris oo muhiim ah oo muhiim ah, aynu si dhakhso ah ugu orodno mowduucyada aasaasiga ah ee udubdhexaadinta ganacsiga - si aad u qaadato go'aan wanaagsan oo ku habboon oo aad ku qaadato xulashada saxda ah. Anigu kuma siin doono talooyinka tooska ah ee ku saabsan hal qalab muhiim ah ee internetka loogu talagalay Amazon. Waxaan loola jeedaa in kaliya ay tahay adiga oo keliya si aad u go'aamisid waxa ku habboon in aad ku haboon tahay dukaankaaga maraakiibta oo dhan ugu fiican - criar site via wordpress blogs. Kaliya maskaxda ku hay fikradaha asaasiga ah iyo talooyinka fudud ee aan dhowaan ku nadiifiyey dhowr sano oo ka mid ah warshadaha, iyo waayo-aragnimadayda dhabta ah ee la xidhiidha mawduuca.
Adkee Muhiimadda Guud ee SEO Si aad u aragto Dhageystaha Nidaamka
Ka hor intaan wax kale, aan aragno - Amazon SEO wuxuu leeyahay waxyaabo badan oo kala duwan oo aan qasab ka dhiganayn si la mid ah sida raadinta caadiga ah ee internetka kula Google. Guud ahaan, farqiga ugu muhiimsan ee kala duwanaanta waa in Amazon optimization ay tahay mid aad u ballaadhan oo faahfaahsan oo faahfaahsan, taas oo inta badan lagu saleeyo ujeedooyinka iibsadaha dukaanka iyo keywords key product gaar ah oo si gaar ah loogu bartilmaameedsanayo ku xiran iibsadahaaga suurtagal ah.
Ogow Doonida Dukaanka Amazon
Abuuritaanka liiska muhiimka ah ee ereyada muhiimka ah ee muhiimka ah. Dhab ahaantii, ma jirto baahi loo qabo in la isdifaaco isku dayga in aad hesho aaladda ugu muhiimsan ee internetka ah ee kuugu jirta hal-sifeyn ee Amazon. Waxaan ula jeedaa in aad si ka fiican u bilaabi lahayd cilmi baaris qotodheer iyadoo la adeegsanayo aasaasiga ah, tusaale,. Dhab ahaantii, taasi waxay noqoneysaa kickstart weyn si aad u hesho sawir buuxa oo ku saabsan shuruudaha raadinta ee la xidhiidha iyo erayada dukaamada ugu muhiimsan ee aad ku kalsoon tahay.
Raac Qaabka guud ee Amazon Content SEO
Halkan waa marka aad u baahan tahay in aad qaadato doorashada ugu dambaysa ee qalabka keyword online ee Amazon. Mar labaad - Ma doonayo inaan ku siiyo talobixin toos ah ama soo bandhigto xalal khaas ah. Kaliya raadso Google si aad u hesho qalab caan ah oo adeegsanaya qalab wax ku ool ah oo macaamiisha ah - oo aad samaysay. Waxyaabahani waa in ay jiraan dalabyo badan oo kala duwan (mid ahaan furan oo furan, ama leh liiska lacag-bixinta) si aad ula socotid cilmi-baaris gaar ah oo loo yaqaan 'ecommerce'. Si fudud u qor, mararka qaarkood waxyaabo badan oo aad ku guuleysta ereyada muhiimka ah ama ereyada raadinta dheeraadka ah ee aad ku liis gareyso liistadaada - waxay si fudud u fashilmeen inay keenaan guulaha dhabta ah ee gaadiidka (ma aha in la xuso horumarkaaga la filayo ee ku yimaadda heerka ugu wanaagsan ee isbedelka).
Isbedelka u dhexeeya Noocyada Ereyada
Ha isku wadi wakhti aad ku baarayso liiska dhammaan jumlado raadin dheer oo rajo leh. Xasuusnow - kuwaa jumlada ah ee isku duubaya erayada iyo ereyada badanaa waxay leeyihiin caadi ahaan heerka guud ee tartanka muhiimka ah. Sidaa daraadeed, maalgelinta wakhtigaaga si aad u heshid isku-darka raadinta runta ah ee wali qadarinaya tartamayaasha ugu dhow - waa fure u ah guusha ganacsiga ee Amazon. Ka dib oo dhan, halkan waa xaqiiqo qabow - ku dhowaad 70% raadinta alaabada Amazon waxaa lagu qiyaasay in ay gaar ahaan la socoto weydiinta raadinta dheer. Taas macneheedu waa wakhtiga iyo dadaalkaaga aad ku bixisey waxaa had iyo jeer bixiya lacag, si hubaal ah.